कसरी एउटा Microsoft Excel स्तम्भ र प fix्क्ति ठीक गर्ने मोबाइल फोरम
कसरी Microsoft Excel स्तम्भ र प fix्क्ति ठीक गर्ने
डेनियल टेरासा | | माइक्रोसफ्ट एक्सेल, कार्यालय स्वचालन
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफैलाई सोध्ने प्रश्नहरू मध्ये एक स्प्रेडशिटहरूमा काम गर्दा हो कसरी एक्सेल स्तम्भ फिक्स गर्ने। र केवल स्तम्भहरू मात्र छैनन्, प r्क्ति र कक्षहरू पनि। प्रश्न खडा हुन्छ विशेष गरी जब तपाईं डाटाको ठूलो मात्राको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं पछाडि बारम्बार सन्दर्भ स्तम्भ / प row्क्ति / सेलमा जानु पर्छ।
सामान्यतया हामी सबैले देख्न चाहेको स्तम्भहरू र प are्क्तिहरू हुन् जसमा शीर्षक वा हेडिंग हुन्छन्, यद्यपि यस ट्रिकलाई अन्य पows्क्तिहरू र स्तम्भहरूसँग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ (तिनीहरू पहिलो हुनुपर्दैन)।
एक्सेल स्तम्भ फिक्स विधि प्रयोग नगरी, स्प्रिडशिटहरूको साथ काम गर्न ढिलो, कष्टकर र ढिलो हुन सक्छ। कहिलेकाहीं दिक्क लाग्ने पनि। हामी लगातार प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौं स्क्रोल गर्नुहोस्, ब्लेडलाई माथि देखि तल वा साइडवेमा सार्दै, धेरै समय बर्बाद गर्दै। र समय त्यस्तो चीज हो जसलाई कसैले पनि छोड्नु पर्दैन।
त्यसोभए हामी यस तरीकाले यो सरल अपरेसन र शक्ति कसरी प्रदर्शन गर्ने भनेर वर्णन गर्ने छौं मा काम एक्सेल धेरै बढी सहज र प्रभावकारी तरिकामा.
एक्सेलमा स्तम्भ फिक्स गर्नुहोस्
फिक्सिंग एक्सेल स्तम्भको कार्यक्षमता यस कार्यक्रममा छ वर्ष २०० of को यसको संस्करण पछि। यसको परिचय ठूला स्प्रिडशिटहरूको साथ काम गर्ने र ठूलो मात्रामा डाटा ह्याण्डल गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठूलो सहयोगी थियो। र यो अझै छ। एक यस्तो चाल जसले हाम्रो उत्पादकत्व बढाउँदछ।
यसलाई राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न, यी अनुसरण गर्नका लागि यी चरणहरू हुन्:
"दृश्य" विकल्पमा क्लिक गर्दा स्तम्भहरू, पows्क्तिहरू र प्यानलहरू स्थिर गर्न तीन विकल्पहरू खुल्दछन्।
सबै भन्दा पहिले, हामी ट्याबमा क्लिक गर्दछौं "दृश्य" जुन स्प्रिडशिटको माथि देखा पर्दछ, जहाँ सबै उपकरणहरू प्रदर्शित हुन्छन्। त्यहाँ हामीसँग तीन विकल्पहरू छन्:
शीर्ष प row्क्ति स्थिर गर्नुहोस्। यो विकल्पको साथ, स्प्रिडशिटको पहिलो प row्क्ति "स्थिर" छ, जुन स्थिर र दृश्यमा रहनेछ जब हामी पानाबाट ठाडो रूपमा सर्छौं।
पहिलो स्तम्भ स्थिर गर्नुहोस्। यो अघिल्लो विकल्प जस्तै कार्य गर्दछ, स्प्रिडशिटको पहिलो स्तम्भ स्थिर राख्दै र दृश्यमा जब हामी कागजात मार्फत तेर्सो स्क्रोल गर्दछौं।
फलकहरू स्थिर गर्नुहोस्। यो विकल्प अघिल्लो दुईको संयोजन हो। यसले हामीलाई सेलमा आधारित डिभिजन सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन हामीले पहिले चयन गरेका छौं। यो एक हो जुन हामीले छनौट गर्न आवश्यक छ यदि हामी एकै समयमा पows्क्तिहरू र स्तम्भहरू स्थिर गर्न वा फिक्स गर्न चाहन्छौं। साथै घटनामा जुन प set्क्ति वा स्तम्भ हामीले सेट गर्न खोज्छौं पहिलो होईन।
तपाईंले कार्य गर्न लाग्नु भएको कार्यमा निर्भर गर्दै, तपाईंले तीन विकल्पहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुपर्नेछ।
प remain्क्ति र स्तम्भहरू जुन स्थिर रहन्छ द्वारा छुट्याईन्छ सेलको मोटो रेखा जसले तिनीहरूलाई चिह्नित गर्दछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि फिक्सिंग एक्सेल स्तम्भहरू (वा प or्क्तिहरू वा प्यानलहरू) एक दृश्य स्रोत हो। अर्को शब्दमा, पows्क्ति र स्तम्भहरू स्थिति बदल्दैन हाम्रो स्प्रिडशिट भित्र मूल, ती केवल हामीलाई मद्दतको लागि दृश्यमान देखिन्छन्।
कार्य समाप्त भएपछि हामी फेरि फर्केर जान सक्दछौं स्थिर पows्क्ति र स्तम्भहरू "जारी गर्नुहोस्"। यसको लागि हामीले फेरि «दृश्य» विन्डो पहुँच गर्नुपर्नेछ र हामीले पहिले छनौट गरेको विकल्प निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ।
एक्सेलमा विन्डो विभाजन गर्नुहोस्
हामीले हेर्‍यौं, एक्सेल स्तम्भहरू ठीक गर्नुको उद्देश्य स्प्रेडशिटहरूसँग काम गर्न सजिलो र कागजातको अधिक सहज दृश्यको माध्यमबाट काम गर्नु हो। तर यो केवल चाल मात्र होइन कि हामीलाई मद्दत गर्दछ। कागजात वा कार्यको प्रकारमा निर्भर गर्दै, यो अधिक व्यावहारिक हुन सक्छ एक्सेल विन्डो विभाजन गर्न विकल्प.
यो कार्यक्षमतामा के समावेश छ? सामान्यतया यो स्प्रिडशिटको स्क्रिन विभाजन गर्ने बारेमा हो ताकि उही कागजातको बिभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, एक स्क्रिनमा हामी पहिलो स्तम्भ देख्न सक्दछौं यसमा समावेश सबै जानकारीको साथ, दोस्रो स्क्रिनमा हामी बाँकी कागजातको माध्यमबाट स्क्रोल गर्न सक्दछौं।
एक्सेल स्क्रीन दुई मा विभाजित
आउनुहोस् हामी कसरी Microsoft Excel मा यो विकल्प प्रयोग गर्न सक्दछौं:
अघिल्लो विकल्पमा जस्तै ट्याबमा जानु भन्दा पहिला जान्छ "दृश्य".
त्यहाँ तपाईले विकल्प छान्नु पर्छ "Divide" स्क्रीन स्वचालित रूपमा चार क्षेत्रहरु मा विभाजित हुनेछ।
यस तरीकाबाट हामी उही कागजातको चार भिन्ना भिन्नै दृष्टिकोण प्राप्त गर्नेछौं, ती प्रत्येकमा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न। र प्रयोग नगरीकन स्क्रोल गर्नुहोस् बारम्बार यसमाथि होभर हुनका लागि।
र यदि चार स्क्रिनहरू धेरै नै छन् (कहिलेकाँही चीजहरू सरल बनाउन प्रयास गरेर हामी उनीहरूलाई अझ जटिल बनाउँछौं), त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि छन्। केवल दुई मा विभाजित स्क्रीन संग काम। यस अवस्थामा हामी यो जस्तै अगाडि बढ्न पर्छ:
हामी यसमा फर्कौं "दृश्य"यद्यपि यस पटक हामीले विकल्पको छनौट गर्यौं "नयाँ विन्डो"।
यस बिन्दुमा हामी दुई विधाहरू छनौट गर्न सक्छौं: "समानान्तर दृश्य" वा "सबै संगठित गर्नुहोस्«। दुबैमा पर्दा दुई भागमा देखा पर्नेछ, यद्यपि यदि हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौं भने हामी धेरै प्रदर्शन मोडहरू बीच चयन गर्न सक्दछौं। तेर्सो, ठाडो, मोज़ेक वा कास्केडि।। हाम्रो रुचि।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » कार्यालय स्वचालन » कसरी Microsoft Excel स्तम्भ र प fix्क्ति ठीक गर्ने
पीसीको लागि शीर्ष १० आईपीटीभी अनुप्रयोगहरू